The Float Ụlọ Ọrụ Na-Ahụ Maka Ụlọ - Imewe Mmewe
Ụlọ Ọrụ Na-Ahụ Maka Ụlọ
Mbọsị Ụka 18 Julaị 2021
Ụlọ Ọrụ Na-Ahụ Maka Ụlọ Anyi na-esepụta ije, ime na odida obodo a. Ikpe a bụ 'Realestate Agency', aha realestate bụ [Sky villa], yabụ tụgharịa uche n'echiche dị ka aha ikpe dị ka ebe mbido. Ihe oru ngo a di n’ime ogbe obodo Xiamen, onodu gburugburu ya adighi adi nma, enwere ulo ochie na ebe ihe owuwu, ihe ozo bu ulo akwukwo, odighi uzo di gburugburu. Na njedebe, site na echiche nke [float], dọrọ ebe ahịa ahụ dị elu ruo 2F, ma mepụta ọdịdị ala, ọdọ mmiri a na-ejikọ ọnụ, ya mere, ụlọ ahịa ahụ na-enwe mmasị ịdagharị na mmiri, ndị ọbịa na-agafe nnukwu acreage. nke ọdọ mmiri, na n'ofe ala ụlọ ọrụ ire ere, na-aga steepụ azụ ma gbagoo n'ụlọ ahịa. Ihe owuwu a bu ihe eji aru oru, ihe eji eme ulo na ime ulo n’achọ ijikota na idi n’otu n’usoro.
Aha oru ngo : The Float, Aha ndị na-emepụta ya : Kris Lin, Aha onye ahịa : YONG NIAN Real Estate Development Company Limited.
Ihe ngosi nka a bu ihe mmeri nke onyinye platinum n’egwuregwu egwurugwu, egwuregwu na egwuregwu a na-enwe n’iru ahia.	Ga-ahụrịrị na okike ndị na-emepụta ihe eji emepụta platinum na-enweta ihe pụrụ iche iji chọta ọtụtụ ihe egwuregwu ụmụaka ọhụrụ, ihe ọhụụ, ihe egwuregwu na ihe okike.
Mụtakwuo banyere nhazi a
Chepụta akụkọ mgbe ochie
Ndị na-emebe iwu mgbe ochie na ọrụ ha nwetara ihe nrite.
Fraịdee 16 Julaị 2021
Legends Design Legends bụ ndị ama ama ama ama nke na-eme ụwa anyị ka ọ bụrụ ebe kachasị mma site na iji atụmatụ ha dị mma. Chọpụta ndị na-ese akụkọ ifo na atụmatụ ngwaahịa ha na-emepụta ọhụụ, ọrụ nka mbụ, ihe owuwu ụlọ, atụmatụ ejiji na atụmatụ dị iche iche. Nwee obi ụtọ ma nyochaa ọrụ mmebe mbụ nke ndị na-eji ihe nrite, ndị na-ese ihe, ndị na-ese ihe, ndị na-ese ihe na ụdị dị iche iche n'ụwa niile. Nweta ike site na ihe okike.
Ihe oru ngo
Aha oru ngo
Aha ndị na-emepụta ya
Aha onye ahịa
YONG NIAN Real Estate Development Company Limited
Chitelọ ihe owuwu, ụlọ na ihe owuwu
Idenye aha ma soro
Ihe eserese (412)
Akụkọ zuru oke
Bridal Veil Chandelier Fraịdee 30 Julaị
Illusion Weebụsaịtị Tọọzdee 29 Julaị
Smartstreets-Smartbin™ Sịga / Chịngọm Okpu Wenezdee 28 Julaị
Kwuputa ihe okike gị
You bu onye okike, onye na-ese ihe, onye na-ese ihe, onye ohuru ma o bu onye njikwa? You nwere ezigbo atụmatụ ịkekọrịta? Anyị nwere ezigbo mmasị na ibipụta ihe mbụ na okike sitere n'aka ndị na-ese ihe, ndị na-ese ihe, ndị na-ese ihe, ndị na-ese ihe na ụdị dị iche iche n’ụwa niile. Mee akwụkwọ gị taa.
Kwalite imewe gị
Ebe a na-edebe ebe ochie
Julaị 2021 (93)
Juun 2021 (90)
Mee 2021 (93)
Eprel 2021 (90)
Akụkọ ozi egosipụtara
Ajụjụ ọnụ nke ụbọchị Fraịdee 30 Julaị
Chepụta akụkọ mgbe ochie Tọọzdee 29 Julaị
Nhazi nke ubochi Wenezdee 28 Julaị
Onye rụrụ ụbọchị Tiuzdee 27 Julaị
Otu mmebe nke ụbọchị Mọnde 26 Julaị
Ụlọ Ọrụ Na-Ahụ Maka Ụlọ Kris Lin The Float
2021 Imewe Mmewe.